အဘယ်အရာကိုဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဥရောပမှာတော့လုပ်ပါရန်, ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်အရာကိုဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဥရောပမှာတော့လုပ်ပါရန်, ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 05/12/2020)
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပသို့ဦးသောသူသည်ခရီးသွားများအတွက်တိုက်ကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများလူအစုအဝေး-အခမဲ့အချို့ကိုခံစားနိုငျ, အပါအဝင် အဓိကဆွဲဆောင်မှု စပိန်ခြေလှမ်းများနှင့်တူသော Tivoli ဥယျာဉ်.
ဖေဖော်ဝါရီလတစ် breather ၏အရာတစ်ခုခုသည်: အဆိုပါအလုပ်များအားလပ်ရက်ရာသီအကြားမွှေးအစက်အပြောက်များနှင့် နွေရာသီကျောင်းပိတ်သူများ.
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာ tan ရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပဖြတ်ဖို့မသွားဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဒီအများဆုံးတွေ့ကြုံခံစားရန်ဖြစ်ပါသည် သမိုင်းဝင် မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောက်ဘ်ဆိုက်များ, ထိုအခါ ကြောင်းမီးရထားခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင်ဖို့အချိန်!
အဆိုပါနေစဉ် နွေရာသီလ ဒီထက်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့အဝတ်ကိုဆိုလိုတာ, သုညလူအစုအဝေးနှင့်အတူငြင်းခုန်ရန်ခက်ခဲပါကန့်နှင့် အရာအားလုံးအပေါ်စျေးနှုန်းချိုသာစျေးနှုန်းများ! ဤ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံများ ထသွားမဖြစ်နိုင်များမှာ (သို့မဟုတ် peak ခရီးသွားကြိမ်အတွင်းထပ်ဖွ). ဤတွင်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပခရီးကြှနျတျောတို့၏အကြောင်းပြချက်င်.
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပ: ရောမမြို့, အီတလီ
ရောမမြို့မခံနိုင်သောလူအစုအဝေး၏၎င်း၏သိုလှောင်ဘို့လူသိများသည်. သင်တန်း၏ဖေဖော်ဝါရီလ မှလွဲ.. ဖေဖော်ဝါရီလရောမမွို့ရှိအနိမ့်ရာသီဖြစ်ပါသည်, သင်အများကြီးရှိသည်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ ထိပ်တန်းက်ဘ်ဆိုက်များ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှ. ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, ထိပ်က်ဘ်ဆိုက်များအများကြီးဖေဖော်ဝါရီလကျော်အခမဲ့များမှာ. ယင်းတွင် ဖေဖော်ဝါရီလပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေ, ပြည်နယ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ပြတိုက်များမှာ လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့. ဒါကတူသောရှေးဟောင်းက်ဘ်ဆိုက်များလည်းပါဝင်သည် Colosseum, ဖိုရမ်, Palatine Hill က, Caracalla နှင့် Ostia Antica ၏ရေချိုးခန်း; နှင့်တူသောပြတိုက် Borghese ပြခန်း နှင့် Palazzo Barberini.
အထူးသဖြင့်ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပ၌ပေါ်မယ့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, ကပယ်-ရာသီဖြစ်ခြင်းမှတပါး. ဤတွင်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းရောမမွို့ရှိဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာစာရင်းတစ်ခုဖွင့်.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2019 – ခြောက်လနိုင်ငံများအသင်းရပ်ဘီ Stadio Olimpico မှာဝေလနယ် v အီတလီ, ရောမမြို့ 17:45
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2019 – ဤသည် INSIDE တစ်ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါတယ် ဗာတီကန်စီးတီး, ကဗာတီကန်စီးတီး၏အခြေခံအုတ်မြစ်များနှစ်မြောက်င်အဖြစ်. အဆိုပါ ဗာတီကန်ပြတိုက် ဤသည်နေ့ရက်ပိတ်ထားကြသည်.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2019 – စိန့်. ချစ်သူများနေ့
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2019 – ခြောက်လနိုင်ငံများအသင်းရပ်ဘီ အိုင်ယာလန်နှင့် Stadio Olimpico v အီတလီ, ရောမမြို့ 16:00
မတ်လ 1, 2019 – ပျြောပှဲသဘငျ, ok နည်းပညာပိုင်းဤသည်၌ဖြစ်ပါသည် မတ်လ ဒီနှစ်, ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းပွဲတော်ကြီးကိုချစ်သောသူ, ဒါကြောင့်ကလေးတွေဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး confetti ကိုမတ်လမတိုင်မီပစ်ချလိုက်တာကိုမြင်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် 1
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် 6, အနောက် Coaster ထာဝရစီးတီးမှခရီးစဉ်ဘွတ်ကင်အသစ်အကြောင်းပြချက်များ: နော်ဝေလေကြောင်းရောမမြို့မှ Oakland ကနေသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းစတင်နေသည်, အဖြစ်အနိမ့်ပျံသန်းမှုနှင့်အတူ $200 တစ်ခုချင်းစီကိုလမ်း. ဒါကြောင့်တည်းခိုခန်းမှကြွလာသောအခါအပိုသုံးစွဲမှုများအတွက်အခန်းကိုစွန့်ခွာဖို့်၏, ဒါကြောင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစား မဟာ, မှာအနုပညာ-ဖြည့် suite ကို ဟိုတယ်က de Russie, ညာဘက်စပိန်ခြေလှမ်းများကနေထောင့်ပတ်လည်မှာပုဂ္ဂလိကကျန်ကြွင်းဥယျာဉ်များနှင့်တစ်ဦးလူသတ်သမားတည်နေရာနှင့်အတူတစ်မှတ်တိုင်အိမ်ခြံမြေ.
ပေါ်တူဂီ ၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာသောစပျစ်ရည်ဒေသများနှင့်ပါအဘို့အလူသိများသည် ကမ်းခြေမြို့များ, ဒါပေမယ့် Carnaval မှနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ကိုအများကြီးရှိမယ့်! အဆိုပါလေးရက်ကြာအခမ်းအနားဟာဆဲရရှိသွားတဲ့ ရက်သတ္တပတ် ပြီးနောက် ချစ်သူများနေ့ နှင့်စစ်ရေးပြပါဝင်သည်, မယ်, လူအပေါင်းတို့အမျိုးမျိုးဖျော်ဖြေပွဲ.
Madeira အတွက်ပွဲတော်ကြီးပွဲတော်ဖြစ်ပါသည် ဒေသ၏ liveliest ပွဲတော်များများထဲမှ. Funchal မြို့ အဆိုပါမြို့လယ်ဧရိယာ၏တပြင်လုံးကိုသူတို့ရဲ့ကောင်းသောဟာသဆောင်ခဲ့သောကြေးဝါကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ပွဲတော်စစ်ရေးပြ၏အသံတစ်ဦးသောကြာနေ့နံနက်အပေါ်နှိုး. ဒါကငါးရက်ဆက်တိုက်များအတွက်PraçaမMunicípioအတွက်ပြပွဲနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူညနေပိုင်းတွင်သို့ဆက်လက်. ပါတီအကြောင်းပြောဆို!
စနေနေ့ညဥ့်သော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါခမ်းနား float! သူတို့ရဲ့အစဉ်အလာကိုအောက်ပါပြီးနောက် ခရီးစဉ် မြို့အမှတဆင့်, သူတို့ကမြို့ရင်ပြင်ထဲမှာအာရုံစူးစိုက်. အများကြီးသီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ကခုန်ဂီတနှင့် merrymaking တစ်ဦးမှော်လေထုထဲတွင်ရှိပါသည်နေရာအရပ်ဖြစ်၏.
အဆိုပါပွဲတော်ကြီးသူ့ဟာသူ၏နေ့တွင် (Shrove အင်္ဂါနေ့), Funchal ပျော်စရာ၏ဂျဖြစ်လာ! ဒါဟာအချိန်ဖြစ်ပါသည် လူကြိုက်များချီတက်ပွဲ. ဤကာလတစ်လျှောက်လုံး, Funchal ၏လမ်းများအလင်းအိမ်၏ပုံစံများနှင့်အတူအလှဆင်ခြင်းနှင့်နောက်ခံမြေများပျက်စီးနေကြတယ် ဂီတ အဆိုပါပွဲတော်ကြီးကာလကိုရည်ညွှန်း.
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပ: Tuscany, အီတလီ
Tuscany အမြဲကောင်းတစ်ဦးအယူအဆဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဤလ, Rosewood Castiglion del Bosco - အဖြစ်ပွနျလညျထူထောငျခဲ့ကွောငျး 17 ရာစုလယ်တောအိမ်၌အတူတစ်ဦးကောင်းချီးအိမ်ခြံမြေ ဇိမ်ခံ Villas - ဒေသတွင်းအကြီးမားဆုံးဖြစ်ရပ်အားလုံးကိုထွက်နေသည်. Montalcino ထိပ်တန်းဝိုင်ပြုလုပ်နည်းနှစ်စဉ်အတူတကွလာ Benvenuto Brunello ပွဲတော် (ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15ကြိမ်မြောက် သို့ 19ကြိမ်မြောက်, 2019,).
အဆိုပါလေးရက်ကြာစပျစ်ရည်ကို-ပွဲတော်တွင် - သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ပြောသင့် အဖြစ်အပျက် - သူတို့ရဲ့နင်္ဂနွေနေ့ကအကောင်းဆုံးအတွက် jowl မှပါးရပ်နေ Montalcino ရဲ့နှစ်ရာပေါင်းထုတ်လုပ်သူများအများအပြားတွေ့မြင်တစ်မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင်နေ့ရက်ကာလ၌တစ်ဦးဆံပင်ချိန်းချင်ပေလိမ့်မည်ထင်ပါလျှင်ကြိုတင်သင်အမှန်တကယ်ယခု booking ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်, နှင့်အတူတူပင်အဘို့အသွား ဟိုတယ်များ.
အသစ်တိုးချဲ့နှင့် refurbished Boutique ဟိုတယ်, Monteverdi, Val d'Orcia ၏ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဒေသအတွင်းတည်ရှိသည်, Tuscany. အဘယ်မှာရှိစိမ်းလန်း စပျစ်ဥယျာဉ် တောင်ငယ်တို့သည်စောင်. တိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ, oenophiles ဒီ bucolic မှရေးဆွဲနေကြ အီတလီနိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်း. သူတို့က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် Brunello နှင့် Brunello Riserva ၏ဖန်တီးမှုဆင်နွှဲ စဗျစ်ရည်. လူအစုအဝေးတို့သည် Benvenuto Brunello များအတွက်တောင်ကုန်းထိပ်မြို့ Montalcino သိမ်း ပွဲတော်. သို့သော်ယခုနှစ်တွင်, Monteverdi ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခမ်းအနား hosting ပါလိမ့်မည်, ဤဒေသအပေါ်အဘို့အလူသိများသည်ဒဏ်ငွေသည်စပျစ်ရည်တစ်ဦးထက်ပိုရငျးနှီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေး တာဝန်ယူထားသောခရီး စပျစ်ရည်ကိုရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်း.
အဆိုပါပွဲတော်ဖေဖော်ဝါရီလကနေတခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ 15ကြိမ်မြောက် သို့ 19ကြိမ်မြောက်, 2019, သင်တစ်ဦးပဲ့ထိန်းခရီးထွက်သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်, ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် vinting ထံမှမျိုးစုံမြည်းစမ်းနဲ့ချိတ်တွဲရန်, ဒီအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်သောအမွေအနှစ်နှင့်ရှုခင်းအတွက်ယူ အထူးသဖြင့်စပျစ်ရည်ကို.
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပတွင်ဤအရပ်တို့ကိုမဆိုတဦးတည်းမှရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသိလို? တစ်ဦးကရထား Save ဒါပေါ့! အကောင်းဆုံးကိုဈေးနှုန်းများကိုရှာဖွေကြှနျုပျတို့၏ website မှကိုကျော်ပေါ်ဦးခေါင်းကို, စက္ကန့်အတွင်း!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-february-travel-tips%2F%0A - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / es သို့မဟုတ် / nl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
အီတလီ travelitaly travelportugal travelrome tuscany